UBUDE ngaseLwandle - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguAnne
Indlu yethu entle enamabali amabini iza nedekhi ezininzi kunye nendawo yangaphandle. Kukho iimayile ezingama-90 elunxwemeni ngaphandle kwesango nangaphaya kwenduli yesanti. Ihlobo lizisa iintsuku ezinde ezishushu zolwandle zokuqubha, ukuloba, ukuhamba, ukuhlala kumgangatho kunye nokonwabela isidlo sangokuhlwa malunga nomngxuma wethu ovulekileyo womlilo (okanye ukuhlala ngaphakathi kumlilo wethu opholileyo ebusika). I-Honeysuckles yindlwana encinci, akukho venkile okanye iiresityu, enesantya esicothayo-ilungele ukuchitha ixesha elisemgangathweni nabahlobo kunye nosapho-abanye abakhe bayivule iTV.
Indlu yethu eyonwabisayo ineebhedi ezininzi kunye nedekhi kodwa incinci indawo yempahla ke yiza nebhegi onokuthi uyigcine ngokulula phantsi kwebhedi. Kukho izinyuko ezimbalwa ukuya kumgangatho (inqanaba lokungena) ukusuka kumgangatho ophantsi - ngaphandle kwamagumbi amabini okulala aphezulu yonke enye into ikwinqanaba lomgangatho (igumbi lokulala likakumkanikazi, igumbi lokuhlambela, ikhitshi, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlala). Ininzi indawo yokupaka ekhoyo. Uninzi lweempawu kunye nendlu yeeholide kuyo yonke ingqiqo yegama.
Yindlu encinci ke ukuba niliqela elikhulu yizani nizilungiselele ukusebenzisa iindawo zomgangatho ongaphandle (itafile enkulu/izitulo, iB-BQ njl njl) ukuze nizithuthuzele.
IiHoneysuckles zibekwe kanye kwi-90 Mile Beach ngoko akukho mfuneko yokuba uye kwenye indawo kodwa ikwayindawo entle yokuzisekela kuhambo lwemini ukuya kwiindawo ezininzi ezinomtsalane zendalo zaseGippsland.
Singadibana nawe kwaye sikubonise ngeenxa zonke (ukuba ixesha lakho lokujonga liphambi ko-5pm) ukuba uyathanda - kungenjalo izitshixo ziya kuba kwibhokisi yokutshixa. Sikulungele ukuthetha nathi ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo xa ufika.
Singadibana nawe kwaye sikubonise ngeenxa zonke (ukuba ixesha lakho lokujonga liphambi ko-5pm) ukuba uyathanda - kungenjalo izitshixo ziya kuba kwibhokisi yokutshixa. Sikulungele u…